OPTION NEWS - ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးပါ
အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့
အနိုင်ရရှိမှု -“ Welten, Weiten” စာအုပ် - Ute Mayrhofer
လေ့လာမှုအသစ်- ကားကြော်ငြာများ၊ လေယာဉ်များသည် ဆီတွင် အသွားအလာကို ထိန်းညှိပေးသည် | Greenpeace int.
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Parents for Future တွင် ကျွန်ုပ်ပါဝင်ရသနည်း။
Biber နွေရာသီကျောင်းတွင် Yalla ရာသီဥတုကာကွယ်ရေး
WWF နှစ် 50 ရေလွှမ်းလွင်ပြင် အရံ March-Taya Auen (နှစ် ၅၀ ပြည့် ရုပ်ရှင်) | WWF သြစတြီးယား
WWF ၏ နှစ် 50 ရေဘေးလွင်ပြင်ဘေးမဲ့တော Marchegg | WWF သြစတြီးယား
FIFA- ကာတာရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် လျော်ကြေးပေးခြင်း | လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
သင်မည်သို့တုံ့ပြန်မည်နည်း။ | EBI တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှု | VGT သြစတြီးယား
အီသီယိုးပီးယားသည် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၄၀ အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး မိုးခေါင်ရေရှားမှုဒဏ်ကို ခံစားနေရသည်။
🐵💙🧡The Gold Snub Nose: Chinese Blue Faced Monkeys🐵💙🧡 #shorts #goldensnabnosedmonkey #cute | WWF ဂျာမနီ
"Dangerous Delay 2: The Price of Inaction" | အရှေ့အာဖရိကရှိ စားနပ်ရိက္ခာ အကျပ်အတည်း | Oxfam
အရိပ်ဘဏ္ဍာရေးအညွှန်းကိန်း 2022- ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဒေါ်လာ ၁၀ ထရီလီယံ
ရေနံလောင်စာများအတွက်စစ်ပွဲ | Greenpeace ယူကေ
option.news ဖြစ်ပါတယ် စံနမူနာသတင်းအသိုင်းအဝိုင်း zu အပြုသဘောအခြားနည်းလမ်း, ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ဤနေရာသည်သတင်းများကိုရေးပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်တန်ဖိုးရှိသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုပေးသောနေရာဖြစ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှင့် ဘာသာစကား 104 သို့ဘာသာပြန်ထားသော။ ယခုဆက်သွယ်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ပြီးတင်လိုက်ပါ.
Info | မှတ်ပုံတင်ပါ | ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း | ထောက်ခံမှုရွေးချယ်မှု
ဘောဂဗေဒပညာရှင် Kemfert, Stagl - ရုရှား ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ မပါဘဲလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကလေးပစ္စည်းများ- အားလုံးနီးပါး ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်
အဖိနှိပ်ခံ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အနာဂတ်တိုက်ပွဲ
Drift သည် အိပ်ခန်းထဲသို့ ပိုးသတ်ဆေးများ ယူဆောင်လာသည်။
Genuine Progress Indicator GPI ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
ဒစ်ဂျစ်တယ် detox- မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် Co မပါဘဲ နေ့စဉ်ဘဝ အော့ဖ်လိုင်းကို မေ့လိုက်ပါ။
Tigray | တွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ Amnesty Australia
ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော ပလတ်စတစ်ပုလင်းများအတွက် အပ်ငွေများကို သြစတြီးယားသို့ ရောက်ရှိလာသည်။
ဒါ့အပြင် Sewdind ၏အသနားခံစာ Chain ACT လက်မှတ်ထိုးသည်
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကာအကွယ်သည် မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။
ကွန်ကရစ်၊ ကတ္တရာ၊ လမ်းဖြိုချခြင်းအတွက်မြေဖို့ခြင်းတားမြစ်ခြင်း - ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
တောက်ပသောအပူနှင့် convection အပူအကြားခြားနားချက်
တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၅၀ ဖြင့်သုံးစွဲသူတစ်သန်း၏လေးပုံတစ်ပုံအထိရောက်ရှိပါ။
ဒေသဆိုင်ရာပြက်လုံး- ဒေသဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ်မဟုတ်ပါ။
အခြားနည်းလမ်းများ & ထင်မြင်ချက်များ
အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း- မှန်ဘီလူးအောက်တွင် ဖြေရှင်းချက်အသစ်များ
BauKarussell- ပွင့်လင်းမိုင်းတွင်းနေ့တွင် ဖျက်သိမ်းခြင်းအနုပညာ
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Circular Globe Label ကို ချီးမြှင့်ခံရသော ကုမ္ပဏီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဏ်တွေက ဘယ်လောက်အထိ တည်တံ့နေလဲ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ထိန်းချုပ်ရေး၏ထိပ်တွင်ကြီးထွားလာ | ဆေးဝါးစည်းရုံးရေးမှူးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ သြစတြီးယားကို တိုက်ခိုက်တယ်။
"ကျွန်ုပ်တို့၏ သမုဒ္ဒရာများသည် စက်မှုဇုန်များဖြစ်လာသည်" - Greenpeace အစီရင်ခံစာသည် UNO သမုဒ္ဒရာ ညီလာခံကြီးတွင် အဖျက်သဘောဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်းကို ဖော်ပြသည်။
ယူကရိန်းရှိ နျူကလီးယား ခြိမ်းခြောက်မှုများကို လေ့လာခြင်း – တစ်ခုတည်းသော အဖြေမှာ စစ်ပွဲကို ချက်ချင်း အဆုံးသတ်ခြင်း | Greenpeace int.
IPCC အစီရင်ခံစာအသစ်- လာမည့်အရာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်မထားပါ။ Greenpeace int.
EU ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဥပဒေ- နောက်ထပ်တင်းကျပ်ရန် လိုအပ်သည် | Attac သြစတြီးယား
အခွန်အလွဲသုံးစားမှုဟာ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၄၈၃ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။
ORF- အစိုးရရုပ်မြင်သံကြားက ဘယ်သူတွေ ဆောင်ရွက်ပေးတာလဲ။
ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေက ငါတို့ရဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုပိတ်ဆို့ထားလဲ။
လူသားချင်းစာနာမှု၊ ထောက်ပံ့မှုနှင့် နိုင်ငံရေးမအောင်မြင်မှုတို့အကြား၊
သက်ဦးဆံပိုင်ကမ္ဘာ၊ အမြတ်ထုတ်သောစီးပွားရေးနှင့် "ချမ်းသာသူများ၏ ပြည့်တန်ဆာများ"
ALTERNATIVES & ထင်မြင်ချက်များမှနောက်ထပ်
spam မရှိပါ သင့်အချက်အလက်များကိုဖြတ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ သင်သည်သင်၏မှတ်ပုံတင်အတည်ပြုရန်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ spam ဖိုင်တွဲကိုလည်းစစ်ဆေးပါ။
သငျသညျကိုဆက်လက်အသုံးပြုပုံသင်တို့သည်ငါတို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကသဘောတူသည်။
Option Print - ယခုစာရင်းသွင်းပါ!
#1 Karin Bornett မှတ်။ 1.020,7
#2 Kindernothilfe မှတ်။ 741,8
#3 RepaNet မှတ်။ 482,4
#4 Tommy မှတ်။ 379,9
#5 Marina IVKIC မှတ်။ 315,9
#6 ရောဘတ်ခ Fishman မှတ်။ 302,1
#7 Lisa Thaler မှတ်။ 288,6
#8 ဟာနန်အေ မှတ်။ 282,4
#9 တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက် eV ဆန့်ကျင်ဆရာဝန်များ မှတ်။ 277,2
#10 ဂျူလီယာ Siegesleitner မှတ်။ 271,8
#11 Adisa Zukanovic မှတ်။ 270,2
#12 Lisa ကို Huppertz မှတ်။ 268,2
#13 Felix Winterteller မှတ်။ 267,8
#14 အသင်း NL40 မှတ်။ 267,8
#15 Maximilian Pernhofer မှတ်။ 267,5
#16 Leah Purrer မှတ်။ 267,2
#17 Amelie Nussbaumer မှတ်။ 267,1
#18 လော်ရာ Wiedemayer မှတ်။ 265,9
#19 လီနာ မှတ်။ 265,7
#20 Victoria1417 မှတ်။ 265,0
#21 နင် မှတ်။ 264,8
#22 ဖလိုရီဒို မှတ်။ 264,6
#23 ကလေးများလူမှုရေးအသင်း မှတ်။ 264,4
#24 ဂျူလီယာ Schumacher မှတ်။ 264,4
#25 Sarah မှတ်။ 264,0
Greenpeace သည် ဒတ်ခ်ျဆိပ်ကမ်း | Greenpeace int.
EU ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Energy Charter Treaty (ECT) သည် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း indus ၏ ညစ်ပတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။
21st 1to1 ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု အသေးစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပဏာမခြေလှမ်းများ
SOL Symposium 2022- တိုးတက်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်း - စီးပွားရေးကို ကွဲပြားစွာတွေးတောခြင်း။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် ရုရှားရေနံတန်ချိန် ၁ သိန်းကို ပင်လယ်ပြင်တွင် သယ်ယူခြင်းမပြုရန် ပိတ်ဆို့ထားသည်။ အစိမ်းရောင်ငြိမ်းချမ်းရေး
ဂျာမနီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် တံဆိပ်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် အတည်ပြုချက်ထုတ်နေသည်။
အများအကျိုးအတွက် စီးပွားရေးသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်ရန်အတွက် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုလုပ်ဆောင်ပါ။ ဗီယင်နာတွင် မတ်လ 2022 ရာသီဥတုသပိတ်
ကျွမ်းကျင်သူ အကြံဉာဏ်များ- ကုမ္ပဏီများသည် ဝန်ထမ်းများကို ပျော်ရွှင်စေပုံ
"ကျွန်ုပ်တို့သည် ယူကရိန်းမှ အိုင်တီပညာရှင်များကို အနိုင်ယူနိုင်သော အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ပေးနိုင်သည်"
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးခုန်နှုန်းထိန်းသူများဖြစ်သည်။ ကလေးအခွင့်အရေးအတွက်။
EU CSRD- ဘုံကောင်းကျိုးအတွက် စီးပွားရေးသည် ယခုအခါ EFRAG အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး လွတ်လပ်သော အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ယူနီယံ အချုပ်အခြာအာဏာကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Lobau သိမ်းပိုက်မှုကို ရဲများက ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
အထူးလျှော့စျေး & အသိအမှတ်ပြုမှု
“ လူမှုရေးပြilနာ” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးအဘယ်ကြောင့်အရူးအမူးဖြစ်နေသည်ကိုရှင်းပြသည် - လက်ရှိမြင်တွေ့ရမည့်အရေးအကြီးဆုံးရုပ်ရှင်
ကျားသစ်တွေ ဘယ်လောက်မြန်သလဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ကို တခြားကြောင်မျိုးစိတ်တွေနဲ့ ဘာတွေထူးခြားသလဲ?🏃‍♀️🐆 #shorts #cheetahs | WWF ဂျာမနီ
ရေတွက်! ဂျာမန် အင်းဆက် | သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးသမဂ္ဂ ဂျာမနီ၊
တိရစ္ဆာန်သက်သာရေးအချက်များ #2 #short | VGT သြစတြီးယား
ထိုင်းတွင် ကျားအမျိုးအနွယ် | WWF သြစတြီးယား
👀 ဤသည်မှာ Greenpeace နဖူးစည်းပုံကို ဖန်တီးပုံ | Greenpeace ဂျာမနီ
🐄 နွားတွေ ဉာဏ်ကောင်းသလား။ 🐮 New PandaFAQ အပိုင်း ✨✨#shorts #kuh #teaser | WWF ဂျာမနီ
နွားလား နွားလား? အလိုအလျောက်ဖြည့်စွက်စိန်ခေါ်မှု #pandafaq | WWF ဂျာမနီ
🦦 Just anOTTER Reel 🦦 😍 #shorts #otter #süß #otter | WWF ဂျာမနီ
VW ၏တရားစွဲဆိုသူ Clara Mayer သည် Volkswagen ရှယ်ယာရှင်များထံမှ ရာသီဥတုကာကွယ်ရေးကို ပိုမိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ Greenpeace ဂျာမနီ
စက်တင်ဘာလ 14 ရက်နေ့မှ 17.9 ရက်နေ့အထိ #oneplanetforum အတွက် ယခုပဲ လျှောက်ထားလိုက်ပါ။ ဘာလင် | WWF ဂျာမနီ
Rebel Meat - သတိရှိအသားစားသုံးမှုအတွက်
နောက်ထပ် | တစ် ဦး ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာ
ခြွင်းချက်မရှိ အခြေခံဝင်ငွေ- ဩစတြီးယားဆန္ဒခံယူပွဲ၌ လက်မှတ်ပေါင်း 168.981
အော်ဂဲနစ်ဝါဂွမ်းကနေဖန်ဆင်းတော် Option ကိုကြည်းတပ်ဦးထုပ် | အဝါနုရောင်ရှိသော
Kochlust ထိုနေ့ကိုပု III ကို - အသိ & နည်းမနော | အစား 20 33 ယူရို
မှာ 10% လျှော့စျေး Wolkenlos Kosmetik 30 ယူရိုဝယ်ယူတဲ့အခါ
အသင်း ၀ င်ဈေးနှုန်းဖြင့် RepaNet webinar၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊
"ကမ္ဘာ, ကျယ်ပြန့်" - Ute Mayrhofer
သင်၏ box ပြတင်းပေါက်များခေတ်မီခြင်းအပေါ် 5% လျှော့စျေး
Lobbies vs. Supply Chain Law: စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းဗျူဟာ
အွန်လိုင်းဆင်ဆာဖြတ်ခြင်း 2021- တင်းကျပ်မှုနှင့်အတူ ဂရိနိုင်ငံသည် အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
သေဒဏ်ပေးသူနည်းပါးလာသော်လည်း Corona ရှိနေသော်လည်းသေဒဏ်ပေးမှု ၄၈၃ ခုရှိသည်
Corona ကူးစက်ရောဂါ - ချမ်းသာသူနှင့်ဆင်းရဲသူများအကြားကွာဟချက်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်
သြစတြီးယားတစ်နိုင်ငံတည်းတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် နှစ်စဉ် လူ ၆၁၀၀ သေဆုံးနေပါသည်။
လေ့လာမှု- အပူပိုင်းသစ်တောများသည် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းသည်။
နောက်ထပ် ALTERNATIVE စီးပွားရေး
အော်ဂဲနစ် gastronomy- အားလပ်ရက်များသည် အစာအိမ်မှတဆင့် သွားသည်
တောက်တဲ့ အတည်ပြုထားသည်- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို အကာအကွယ်မရှိပါ၊ နွားများ၏ ကိုယ်ခံစွမ်းအားသည် မဖြစ်နိုင်ပါ။
Corona က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ထိခိုက်စေတယ်။
ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ အထင်ကရနေရာ ၁၅ ခု
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကမ်းခြေ ၁၀ ခု
အထိခိုက်မခံတဲ့အသားအရေအတွက်အကြံပြုချက် ၅ ချက်
စမ်းသပ်မှုတွင်ပင့်ကူဆေးထိုးခြင်း - သဘာဝထုတ်ကုန်များအနိုင်ရရှိသူများကိုရှင်းလင်းသည်
mascara နှင့်အတူသတိထားပါ: mascara မကြာခဏမလုံလောက်
စွန့်ပစ်ခြင်းအစား ပြန်သုံးပါ- သြစတြီးယားအောက်ပိုင်းရှိ စွန့်ပစ်သေတ္တာအသစ်များ
ငါးစားသုံးမှုကို လျှော့ချရန် အကြောင်းရင်းကောင်း ၅ ခု
“ဘဝသစ်ပင်” သည် သိသူအားလုံး၏ ဆက်ဆံရေးကို မြင်ယောင်သည်။
နောက်ထပ်အကြံပြုချက်များ | နောက်ထပ်ထုံးစံ
လုပ်ရပ်များ Aktuell အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ စီးပွားရေးအခြားရွေးချယ်စရာ ၾသစေတးလ် သြစတြေးလျ ဂျာမဏီ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဒီမိုများ Gesellschaft Ernährung Gesunde ကျန်းမာခြင်း ကမ္တာ့ Initiatives နှင့်အသနားခံ တီထွင်မှု Kultur နားထောင် သဘော ရေရှည်တည်တံ့သောအဆောက်အဦးများနှင့်နေထိုင်မှု ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ခရီးသွား သဘာဝကအလှကုန် အဲန်ဂျီအိုများ၏သတင်းများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်လုပ်ငန်းများ၏သတင်း အဆိုပါအဲန်ဂျီအိုများ၏သတင်းများ ရွေးချယ်မှု Award 2020 ရွေးချယ်မှု Award 2021 နိုင်ငံရေး ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ ချက်ပြုတ်နည်းများ ဆွစ်ဇလန် ဆွဲငင်အား၏အလယ်ဗဟို တိရိစ္ဆာန်သက်သာချောင်ချိရေး Tipps ခေတ်ရေစီးကြောင်း UK ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Raffled ဗီဒီယိုများ ဗီဒီယိုကိုသိကောင်းစရာများ ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်း မရှိမဖြစ် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့ သြစတြီးယား
ရွေးချယ်မှုသည်စံနမူနာယူစရာ၊ လုံးဝလွတ်လပ်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ဂျာမန်ဘာသာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်မဂ္ဂဇင်းလည်းဖြစ်သည်။ ) အတူတကွကျွန်ုပ်တို့သည်ကဏ္ all အားလုံးတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအခြားနည်းလမ်းများကိုပြသပြီးလက်တွေ့တွင်အခြေခံသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အနာဂတ် - ရည်ရွယ်သည့်အတွေးအခေါ်များကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်။ Option အသိုင်းအဝိုင်းသည်သက်ဆိုင်ရာသတင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတိုးတက်မှုများကိုသာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ နောက်ထပ် INFO
အဆိုပါဂျာမန်ဘာသာစကား option ကိုပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်းဥရောပမှာ 4x ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့် ကြေးပေးသွင်းခြင်းဖြင့် နှင့်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများမှထံမှရရှိနိုင်ပါ။ အဘို့အ app ကိုစတိုးဆိုင်များတွင် epaper အဖြစ် Apple နှင့် အန်းဒရွိုက် နှင့်ပေါ် readly, Readit, Kiosk.at နှင့် ယူနိုက်တက် Kiosk အ.